Dhuusamareeb: Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka maamulka Galmudug oo galabta la dhaariyay +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Dhuusamareeb: Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka maamulka Galmudug oo galabta la dhaariyay +(SAWIRRO)
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Galmudug ayaa Axaddii galabta lagu dhaariyay munaasabad ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Sida ay sheegeen guddiga Farsamada waxay lixda xubnood ee ka harsan tirada guud ee Baarlamaanka Galmudug, ay soo bandhigi doonaan, marka ay u soo gudbiyaan Odayaasha Dhaqanka, ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada.
Inta badan Xildhibaanadan oo lagu murunsan yahay dhabaha loo maray soo xulistooda ayaa waxay galabta Kitaabka Alle ugu dhaarteen inay si daacada ugu adeeggi doonaan dalka iyo dalka.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka taagan diidmo ay Odayaasha Dhaqanka ee beelaha degga Galmudg qaarkood ka keeneen soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka, kuwaa oo ku doodaya in la musuq maasuqay.
Beelaha qaarkood ayaaba sheegaya in laga musuq maasuqay qoondadii ama kuraastii ay ku lahaayen Baarlamaanka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo si adag uga soo horjeestay Xildhibaanada looga dhawaaqay Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan ciddii ka dambeysay.
Madaxweynaha Galmudug oo kasoo horjeestay
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Galmudug oo la dhaariyay